for all MZ Member - MYSTERY ZILLION
for all MZ Member
July 2009 edited July 2009 in Idea
ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ ပိုစ်လေးတစ်ခုတင်ပါတယ် ... ၀ုိင်းေ၀ဖန်နေလိုက်ကြတာများဗျာ လူကို ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး ... စိတ်ညစ်ပါတယ် ...
Forum ဆိုတာ ဆွေးနွေးအကြံပြုကြဖို့အတွက် သက်သက်ပါဗျာ ... တိုက်ခို်က်ဖို့ အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ... မှားရင်လဲ ပြောချင်သလိုသာပြောတော့ဗျာ ...
MZ ကို အသုံးပြုသူတွေအကုန်လုံးကတော့ ဘယ်လိုအတွေး အမြင်တွေနဲ့ ၀င်သုံးကြတယ်မသိပါဘူး
ကျွန်တော် ကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အရမ်းကောင်းတယ် ... ကိုယ်မသိတာတွေ ကို်တွေ့ရမြင်ရတယ်လို့ပြောလို့ member လုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ ...
ဒါနဲ့ပဲ MZ ကို လိုက်ကြည့်၊ လိုက်ဖတ်ဖြစ်ထားတော့ ကိုယ်လဲ ကိုယ် သိတာ တက်တာ ရှိတာလေးကို အများသူငှာ သုံးလို့ရအောင် Share လုပ်ချင်တာနဲ့ပဲ ကိုယ်လဲ ပိုစ်တင်တယ်ပေါ့ဗျာ ... ပိုစ် တင်တာမှ 1-ရက် 2-ရက် ရှိသေးတယ် ... ေ၀ဖန်လိုက်ကြတာများ ... ဘယ်လိုပြန်ပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ... အဲဒီတော့ နောက်နောင်ကို သိတာလေးတွေ ရှိရင်လဲ တင်ပေးမယ်ပေါ့ဗျ ... ဒါပေမယ့် ပြောဆို အကြံပြုတာတွေ ေ၀ဖန်လာတာတွေကို တော့ ဘာတုန့်ပြန်မှုမှ မလုပ်တော့ဘူးဗျာ ... စိတ်မောတယ် ... ဘယ်လိုအတွက်ကြောင့် အကောင်းဘက်က မမြင်ကြရတာလဲဗျ ... လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေ ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲလား ဆိုတာ သိလိုက်ရတာတော့ သင်ခန်းစာပေါ့ဗျာ .... တော်ပါပီဗျာ ... အရမ်းကိုကြောက်သွားပါပီ ... အဲလိုသာ ေ၀ဖန် တိုက်ခိုက်နေကြရင် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ ပို့စ်တင်ပေးနေကြတဲ့သူတွေ နည်းသွားမယ်ထင်တယ်ဗျာ ... ကျွန်တော့် အမြင်သက်သက်ပါဗျာ ...
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လဲ ... ကိုယ်တင်ထားတဲ့ ပိုစ် အကုန်လုံးကို DELETE လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော့် ပိုစ်ကြောင့် MZ က admin တွေ member တွေ စိတ်ဘ၀င်မကျဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်လုံးကို တောင်းပန်လိုက်ပါတယ် ... နောက်နောင် ကျွန်တော် share လုပ်ချင်တာလေးတွေရှိလို့ ပိုစ် တင်ဖြစ်ရင်လဲ ပြန်တုံ့ပြန်မယ်မဟုတ်တော့ပါကြောင်းနှင့် အခြား member များ တင်ထားသော ပိုစ် များကိုလဲ မည့်သည့်အကြံပြုမှုကိုမျှ မလုပ်တော့ပါကြောင်း စိတ်ပျက်အားငယ်စွာ အသိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သတ်သော ပိုစ် များကို အကုန်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါပီ ခင်ဗျာ ...
ပို့့ဖို့အတွက် request လုပ်ထားသော မေးအကောင့်များကို ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ...
MZ နှင့် Member အားလုံးကို လေးစားလျက် .....
ကိုယ်ချင်းတော့စာပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းလွဲနေလားလို့ပြောကြည့်မယ်နော်။ စိတ်ဆိုးနဲ့။
ကို hlabhonemaung တင်ထားတဲ post ဆိုတာက ဖြတ်လိုက်ပီဆိုတော့ ကြည့်လို့မရတော့၀ူးပေါ့။ ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ်လို့ ပြောရအောင် ကျနော်တို့ အဲလောက် အခွင့်မရှိဘာဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာပို့စ်မိုလို့ ဒီလောက်ေ၀ဖန် တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာလေးတော့ သိချင်မိရဲ့။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ထင်ပါတယ်ဗျ။ နည်းပညာဆိုတာကတော့ ဒီလိုပါဘဲဗျာ။ ကိုယ်ယူဆချက်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့က base မှာ တူပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တက်လာလေ ကွာသွားလေလို့ထင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင်ဗျာ - ရိုးရိုး networking သင်တန်းသားလေးတွေ။ အဲ သူတို့ သင်တန်းဆင်းတယ် ကိုယ့်ရဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပီး အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ IT ဘက်ကိုလုံး၀ကူးလာကြတယ်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ certificate ရရုံလောက်လုပ်ကြတယ်။ အဲ IT ဘက်ကူးလာတဲ့သူတွေက တဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်။ Hacking ဘက်ကိုရောက်သွားကြတယ်။ တချို့က ဒီအတိုင်းဘဲ network သက်သက်ပဲ ဆက်လုပ်ကြတယ်။ (Networking လို့ပြောလိုက်ရခြင်းမှာ ဥပမာ သက်သက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း၊ အမှားပါခဲ့ရင် တစ်စုံ တစ်ခုကို ထိခိုက်သွားခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြဖို့တောင်းပန်ပါရစေ) ကဲဒီတော့က သင်တန်းတတ်တုန်းတော့ အတူတူဘဲ။ နောက်ပိုင်းကွဲသွားတာ။ ဟီး ရောသွားဘီ ပြောတတ်တော့၀ူး။
ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက အယူအဆမတူနိုင်တဲ့ မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာတွေမှာ (Hardware/System ပြင်တာတောင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြင်ကြတာလေ) အယူအဆကွဲလွဲတဲ့ သဘောလို့ထင်ပါတယ်။
ကို hlabhonemaung ရဲ့ အဲဒီ့ post လေးကို မဖတ်လိုက်ရတာ တော်တော်လေး နစ်နာတယ်လို့ထင်မိတယ်။ တော်တော်ေ၀ဖန်ခံရတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး ၀ိ၀ါဒ ကွဲပြားနိုင်တဲ့ post လို့ထင်တယ်။ အဲလို post တွေမှာ ကျနော်တို့ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါနိုင်လို့ နှမြောမိပါတယ်။ ကျနော်က လေ့လာသင်ယူနေသူ အဆင့်လေးဘဲရှိပါတယ်။ ၀င်ဖတ်မယ်။ မထိခိုက်အောင် နောက်ပြောင်မယ်။ အဲလောက်ပဲလုပ်တတ်တာမို့ပါ။ အခု ဒီ post က ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းလေး ၀င်ညည်းတာပါ။ ကိုယ်ချင်းလည်းစာပါတယ်။ ကျနော့်ကိုတော့ ဘယ်သူမှ မတွယ်ကြဘူးလေ။ ပျော်ရွှင်စရာ နည်းပညာ ဖိုရမ်လေး အနေနဲ့ဘဲမြင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အစ်ကို စေတနာနဲ့ တင်ထားလို့ အားလုံးကတောင် ကျေးဇူးတင်နေသေးတာပဲ။ ေ၀ဖန်ထားတာဆိုလို့ ဘာ configuration ဆိုလား အဲဒါနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ပဲ တစ်ယောက်ပြောတာပဲ တွေ့မိတယ် (နောက်ရက်ဘာတွေဆက်ပြောလဲဆိုတာ သတိမထားမိဘူး)။ အဲဒါကလည်း သူပြောချင်တာက mz ရဲ့ search function ကို သုံးဖို့ပြောချင်တာပါ။ အပြောမာသွားတာကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့။ ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်လို့ မပြောချင်ပေမယ့် အစ်ကို အဲဒီပို့စ်ကို ဖျက်လိုက်တာကတော့ မှားတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ အထက်ကသူတွေ ပြောသွားသလို အဲဒီပို့စ်ရှိနေမှ အဖြေပေါ်မှာလေ။ ပြဿနာရှိရင် အားလုံးက ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။ ပြဿနာဆိုတာ ဖျက်လိုက်ရုံနဲ့ ပြီးမသွားပါဘူး။ အားလုံးဆွေးနွေးမှ အဖြေပေါ်မှာပေါ့။ အစ်ကိုရဲ့ နောက်ထပ်ပို့စ်တွေကို ဖတ်ချင်ပါတယ်။
PS: အစ်ကိုက အသစ်ဆိုတော့ MZ ရဲ့နောမကျေသေးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခုလိုချင်ရင် search function ကို အရင်သုံးကြည့်ပါ။ တစ်ချို့ ပြဿနာတွေက ဖြေရှင်းပြီးသားတွေရှိလို့ search ကနေကိုယ်လိုချင်တာကို အရင်ရှာကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ :6:(သိပြီး/တတ်ပြီးသား သူတွေကလည်း ဒါကိုနားလည်ပေးပြီး အသစ်မို့လို့ မသိသေးတာကို အပြင်းအထန် မပြောပဲ ဖေးမကူညီပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ :77: )
ကျနော်သာဆိုရင် ေ၀ဖန်တဲ့သူတွေကို ၀င်နောက်လိုက်မှာ ဗျ:d
တော်တော်လေး စိတ်ညစ်သွားတယ်ထင်တယ်။ စိတ်ဆိုးနဲ့နော်။ တိတ်.....တိတ်:P
သိလိုက်ရတာတော့ သင်ခန်းစာပေါ့ဗျာ .... တော်ပါပီဗျာ ... အရမ်းကိုကြောက်သွားပါပီ ... အဲလိုသာ ေ၀ဖန် တိုက်ခိုက်နေကြရင် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ ပို့စ်တင်ပေးနေကြတဲ့သူတွေ နည်းသွားမယ်ထင်တယ်ဗျာ ... ကျွန်တော့် အမြင်သက်သက်ပါဗျာ ...
ကျနော်ကတော့ ကြိုက်သလောက်ပြော ကြိုက်သလောက်ေ၀ဖန် ဂရုမစိုက်ပေါင်။ မသင့်တော်ရင် လူကြီးတွေကိုင်လိမ့်မယ်။ မကြိုက်ရင် မဖတ်ပါ။
အင်း post starter တစ်ယောက်လျော့သွားတာ နှမြောရမှာလားမသိဘူး (
ကျွန်တော်လည်းဖတ်လိုက်ရတယ်၊ ဖျက်ပစ်မယ်မှန်းသိရင် ကော်ပီလုပ်ထားလိုက်ပါတယ်
ဟဲဟဲ ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရပြီထင်တာ ကျွန်တော်တော်တောင် နှစ်နာရီအတွင်းဆွဲကြည့်လိုက်သေးတယ်
ငါးသိန်းရလိုရငြား၊ ဒါပေမယ့်ဒီကြေးက ကိုယ့်အတွက် ဖွင့်ထားတာမှမဟုတ်တာ
သူ့တို့ပြောတဲ့အထဲမှာ ကိုပရင့် နာမည်တောင်ပါသေးတယ်၊ (ဘယ်လိုများ၀င်ပတ်သက်နေပါလိမ့်) ကိုစေတန်ကြီးလည်းပါတာပဲ
ပြောတာတော့အများကြီးပဲ နာမည်တွေပဲ ကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့တယ်
ဒီတစ်ခါတော့ နာလည်း မဖတ်လိုက်ရတာ နာလယ်ကွာ။
ဘာလို့ ဖျက်ပစ်ရတာတုန်းဗျ။ နောက်ဆို မဖျက်နဲ့။
ကိုယ်လုပ်တာ မှန်တယ်လို့ ထင်နေသမျှတော့ Do တာ Do ပါဗျ။
နာဆို ခုချိန်ထိ လုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်။ သူများတွေဘာပြောပြော ဂရုစိုက်ဘူး။
မပြောနိုင်တဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ အကုန်ရပ်သွားလိမ့်မယ့်။
မရှင်းတာရှိသေးလား . . . ရှိပါဘူး။
ဘူမှ စိတ်မဆိုးကြေး . . နာတောက် . . နောက်တာ နော်
ဘယ်သူမှားလဲဆိုတာ မပြောချင်ပေမယ့် လူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ပဲလေ Ko hlabhonemaung။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော...ပြောကြတာတွေ ကိုယ်မှားနေရင်ပြင်၊
မှန်တယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းပဲနေလို့ရပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် "အခြား member များ တင်ထားသော ပိုစ် များကိုလဲ မည့်သည့်အကြံပြုမှုကိုမျှ မလုပ်တော့ပါကြောင်း စိတ်ပျက်အားငယ်စွာ အသိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..." အစ်ကိုသိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တွေ့ရင် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုပေးပါခင်ဗျာ။
ဟုတ်တယ်ပါတယ်ဗျ ကျနောတောင် ဂတ်စ် အကောင့်နဲ့ပဲကြည့်ရဲတယ် တော်ကြာ ကိုယ့်ဘက်လှည့်လာမှာစိုးလို့ သူတိုု့နှစ်ယောက်လုံးက ထရေးစင်း သမားတွေဗျ
တစ်ယောက်က ၂ရက်trace တာ နောက်လူကြီးက ၂နာရီနဲ့ Trace တာဗျ
ခင်ဗျားဗျာ တွေးကြည့်ကြောက်စရာကြီး ၅၀၀၀၀၀ တဲ့ဗျာ
ဟိုအင်တာနက်ဆိုင်ရှင်ြကြီးဆို အင်တာနက်လိုင်းကပျက် ဆိုင်ကလူမ၀င် လူ၀င်တော့လိုင်းကပျက် ညစ်နေတာပေါ့ဗျာ အဲ ညစ်နေတုန်းပေါ့ သူtrace လုပ်လိုက်တဲ့ logo တွေကို vinyl ဆိုင်ရှင်ကြီးက ခွင့်မတောင်းဘဲ စျေးကြီးနဲ့ ရောင်းစားလိုက်တာ အင်တာနက်ဆိုင်ရှင်ကြီး ပေါက်ကွဲသွားတာပေါ့ဗျာ
အဲဒီမှာတင် သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ မင်းက ရောင်းစားရင် ငါကအလကားပေးတယ်ဆိုပြီး အမ်ဇတ်မှာ လာလှူလိုက်တာ။ အိုဗျာ... တန်းစီတိုးစားတွေဆိုတာ ရိုက်သတ်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဗျား ဘူဒိုဇာနဲ့ကို တွန်းထုတ်မှရလိမ့်မယ်
အဲဒီမှာ တင် ဟို အ၀တ်စကြီးခေါင်းမှာ ခြုံထားတဲ့ လူကြီးလေ ...အဲ...သူရောက်လာပြီး
လှိမ့်ငေါက်တော့တာပဲ ... ဆူတယ်ကွ ဘာညာပေါ့ဗျာ ငါလုပ်လိုက်ရ တယ် ဟင်းဟင်းဟင်း ဘာညာပေ့ါနော်
တန်းစီတိုးစားနေတဲ့လူတွေဆိုတာ ပြေးလိုက်တာ မှုံလို့ဗျာ
အဲဒီမှာတင် အင်တာနက်ဆိုင်ရှင်ကြီးဆိုတာလေ ဒေါတွေကန်လို့ လူကြီးနဲ့ဆိုတော့ ကြောက်လည်းကြောက်ပေါ့ ဗျာ အသားတွေတဇတ်ဇတ်တုန်လို့ တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့
င့ါဖြင့် သားရေတွေယိုလို့ ရချင်လိုက်တာ ဟီဟီးဟီး
ဟိုခေါင်းမြီးခြုံထားတဲ့ လူကြီးတော့ နိုင်ရင် ၅၀၀၀၀၀ ထောပြီးပေါ့ဗျာ ...ပွဲကောင်းမှပဲဗျာ. တကတည်း ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြတယ်မသိဘူး
ငါးသိန်းရလိုရငြား၊ ဒါပေမယ့်ဒီကြေးက ကိုယ့်အတွက် ဖွင့်ထားတာမှမဟုတ်တာလုပ်လို့ရမရ မပြောတော့ဘူးနော်
တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပြီထင်တယ်။ ကို hlabhonemaung တင်တာ logo လေးတွေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလား။ နောက်ပိုင်းပြောတာတွေ မဖတ်လိုက်ရလို့လားမသိ။ ဘယ်က ငါးသိန်းလဲဗျ။
pan tool ဆွဲတာလို့ပြောတယ်...
မတူဘူးလေ။ဘာမဟုပ်တဲ့ကိစ္စလေးအတွက် mz ကညီအစ်ကိုတွေကိုစိတ်၀မ်းမကွဲစေချင်ဘူး။:)
ဖျက်တာတွေကတော့ အင်း...ခက်တာပဲ ပြောပေါင်းလဲများပါဘီ
ဒီ forum ကစေတန်တို ့ထောင်ထားတာလေဖျက်ချင်လဲသူတို ့သဘော၊ထားတာလဲသူတို ့သဘော့
ပဲ၊ အဲတော့ ကြိုက်ရင်သုံးမကြိုက်ရင်မသုံးနဲ ့ဒါပဲပေါ့
မအိအိတော့ရေးချင်တာရေးတယ် ဖျက်ချင်လဲဖျက်ပေါ့၊ ရှင်းနေတာပဲ
ကြိုက်တာရေးမဖျက်ဘူး ဆိုတဲ့ forum ထောင်မဲ့လူ လက်တို ့ပါ မအိအိလဲပါမယ်နော်
မအိရေ ကာယကံရှင်က ဘယ်တော့မှပြန်ပေါ်လာမယ်မသိလို့ ထင်တာဝင်ပြောမယ်နော်
ကျနော်ဖတ်ကြည့်တာတော့ သူ့ဟာသူဖျက်လိုက်ကြောင်း အသိပေးတာလားလို့
သူ့ topic ကိုလည်း အစအဆုံးဖတ်လိုက်ရတယ်။
forum ကလူတွေမဖျက်ရင်လဲမအိအိရေးတာကတော့မလွန်ပါဘူးဗျုာ forum ကလူတွေကမသင့်ဘူးထင်ရင်ဖျက်တာဘဲလေ
ဒါကြောင့် ပြောတာနေမှာပါ forum ကလူတွေလဲမသင့်ရင်ဖျက်
လာတဲ့လူတွေကလဲမကြိုက်ရင်မလာနဲ ့လို့ပြောတာ ပါ။
လာပြန်ဘီနောက်တစ်ခု:d။ ဘေးကဘဲကြည့်နေမယ်။ ဘာမှ ေ၀ဖန်နိုင်တဲ့ အရည်းအချင်းမရှိလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြော၀ူးနော်။ ရှိလဲ မပြော၀ူး။ ဘာတွေဆက်ပြောကြ ရေးကြမလဲ စောင့်ကြည့်ပီး ရီနေမှာ။ :d တို့ကတော့ ေ၀းေ၀းကဘဲ ကြည့်နေမယ်။ ဟိဟိ:d
အားပါးပါး ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ ကျွန်တော်မလာမိတယ့်တစ်ရက်အတွင်းဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ
အင်း .. ဖတ်လို့တော့ကောင်းသားဗျ .. တို့ .. ဖွ ... ပင့် .. ဖိ .. :p ဝေဖန်ရေးတော့ မလုပ်ချင်ဘူး .. လူများရင် () များမှာတော့ အသေချာပဲ .. :d:d အတ္တတွေနဲ့ ဖိုရမ်ဖြစ်သွားမှာတော့ စိုးရိမ်မိတယ် .. :68::68:
ကဲလာထားကွ...တို ့သူငယ်ချင်းများရှေ ့သို ့သာဆက်လက်တိုးတက်ရာအတွက်သွားကြပါဆို ့
တုတ် တ ပျက် ဆူ ညံ့ ပွက် တယ် ကွဲ ကြ ပြဲ ကြ ဆော် ကုန် ကြ တယ် MZ ထဲ က တို့ တွေ ရန်ပွဲ ။
နင် ဘယ် သူ လဲ ငါ ဘယ် သူ လဲ တ ကယ် ဆို လူ လူ ချင်း ပဲ မထူးဆန်းဘူး
အိုး forum ထဲမှာ ရန်ဖြစ်တာများ ကဲ ပြောစမ်း forum ဆိုတာဘာတဲ့တုန်း
ေ၀ဖန်တဲ့ သူရော ေ၀ဖန်ခံရတဲ့သူရော ကြားကနေ အတို့ထောင်လုပ်ပေးတဲ့သူရော ေ၀ဖန်နေကြောင်း လိုက်ဖွတဲ့သူရော ေ၀ဖန်ခြင်းမှ မကင်းလွတ်ကြပါစေ။
ကဲ ဒီသရက်ပိုင်ရှင်ရေ အားပေးလိုက်မယ်
အစ်ကို တနေ့ ကို အနည်းဆုံးတော့ မှန်(ကြည့်မှန်ကိုပြောတာနော်) ကို တခါလောက်တော့ ကြည့်တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒိလိုမှန်ကြည့်ြ့ပီးတော့ အစ်ကိုပြင်လို့ရတဲ့ ဆံပင် မုတ်ဆိတ်မွှေး တခုခုတော့ ပြင်လိုက်မိတာမဟုတ်လား။ အဲဒိလိုပဲ ပြင်ဖို့အတွက် အစ်ကို ကြည့်မှန်ကိုတော့ ကြည့်မှရမယ်။ အဲဒိလို ကြည့်မှန်ကို မကြည့်ပဲနဲ့ ကိုယ်မျက်နှာဘာဖြစ်နေသလဲ ဘာပြင်ရမယ်မှန်း ဘယ်လိုမှသိမှာ မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ အဲဒိလို ကြည့်မှန်ကမှ အားမကိုးရင် ငါမျက်နှာကြီးဘာဖြစ်နေသလဲလို့ သူများလိုက်မေးနေရမယ်။ (အဲဒီလိုသူများတကာကိုလိုက်မေးလို့ ကျွန်တော်လိုကောင်နဲ့တိုးရင် သေချာတယ် အနည်းဆုံးတော့ ပေါက်ကရလုပ်လွှတ်လိုက်မှာပဲ။ ) အဲဒိတော့ အခုလို ကိုယ်ကို လာ ေ၀ဖန်တဲ့ သူကိုလဲ အဲဒိလို သဘောထားလိုက် ငါ့မှာရှိနေတဲ့ အမှားတခုကို သူကလာစေတနာနဲ့လာပြောပြတာ ထောက်ပြတာ။ သူပြောတဲ့ဟာကို ငါပြင်နိုင်သလား မပြင်နိုင်ဘူးလား ပြင်နိုင်ရင် ပြင်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ။ မပြင်နိုင်တော့ လဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ အဲဒီမှာသူပြောပုံဆိုပေါက်က စေတနာနဲ့ မဟုတ်ပဲ ငါးစိမ်းသည်ရန်တွေ့သလိုမျိုးဆိုရင်လဲ အသာလေးခေါင်းငုံနေလိုက်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်က ငါးစိမ်းသည်မှမဟုတ်တာနော့။ ကမ္ဘာကြီးဆိုတာ လုံးနေ လည်နေတာပါဗျာ။ တချိန်ချိန်မှာ သူ့အပေါ်ကိုယ် မရောက်ဘူးလို့ ဘယ်သူကပြောနိုင်မလဲ အဲဒီလိုအချိန်ရောက်ရင် ဒင်းငါ့ကို အဲဒိတုန်းက အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တာ အခုငါ့အလှည့်လို့တွေးပြီး ဒေါသတွေပွားနေမယ်အစား ဪ သူငါ့ကိုဒိလိုလုပ်ခဲ့လို့ ငါလဲဒိလောက်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်။ နောက်ပြီး ငါလဲ တချိန်လုံး ဒီစိတ်ဒေါသကြိးနဲ့ နေနေရတယ်။ လို့တွေးပြီးခွင့်လွတ်လိုက်ပေ့ါဗျာ။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ့်ကိုတချိန်တုန်းက ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတနည်းနည်းနဲ့သိအောင်လုပ်ပြီး သူ့ကိုနောင်တရအောင်လုပ်ပေါ့ဗျာ။
နောင်တရအောင်လုပ်တာနဲ့ ဂလဲ့စားချေ နဲ့ မတူပါဘူးဗျာ။ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ေ၀ဖန်တဲ့သူအနေနဲ့ကလဲ ကိုယ်ကစေတနာနဲ့ ေ၀ဖန်တာဆိုရင် အသေချာလေးစဉ်းစားပြီးမှ ေ၀ဖန်တာကောင်းပါတယ်။ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မှု အကုန်လုံး။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် လူတဘက်သားကို အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာ အတင်းတုတ်သလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။ အဲဒိတော့ ကိုယ်စေတနာလဲဆုံး မိတ်လဲပျက် ကိုယ်လဲဒေါသထွက်ရတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အခုလိုမျိုး ေ၀ဖန်တတ်တဲ့သူရော ေ၀ဖန်ခြင်းကိုခံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုး မရှိတော့ တယောက်နဲ့တယောက် အထင်တွေလွဲ အမြင်တွေကွဲပြိး နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ပြီ အခုအချိန်အထိ ဘာမရသေးဘူးဆိုလားပါပဲ သူများတွေပြောတာတော့ကြားဖူးပါရဲ့
အဲဒီတော့ MZ မှ ၇ ရက် သားသမီး(ရာဟုပါအပါ)အပေါင်း ကျွန်တော်ကဲ့သို့ ေ၀ဖန်တတ်ကြပါစေ။ သူတပါး၏ ေ၀ဖန်ခြင်းကိုလဲ ခံနိုင်ကြပါစေ။
ကြားဖူးလား ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ့်ဖော်မသူတော်ဆိုတာလေ။ ဟီး ဟီး:D:D။ အခုလိုသူများတွေကိုယ့်ကို မေ၀ဖန်ခင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရင်ပြန်ေ၀ဖန်ပလိုက်ပြီ ပြောဘယ်သူတွေေ၀ဖန်ချင်သေးသလဲ။ ):)):)):))
ဖျက်လိုက်တာကောင်းပါတယ် ကိုလှဘုန်းရယ် post တွေတော့ထပ်တင်ပါ အားပေးလျက်ပါ။
ကိုယ်ခံရမှသိမှာ လုပ်တတ်တာတော့လူတိုင်းပဲ ရမရတာမသိတာ ရရင်လည်းရမှာပေါ့ ဒါပေမယ့်မတူဘူးလေ ။
for all mz member ဆိုလို့ ၀င်ဖတ်လိုက်တာဗျ...။ ဖျက်လိုက်တဲ့ပို့စ်တွေကတော့ ဖျက်ပြီးပြီဆိုတော့
မတတ်နိုင်တော့ဘူး..။ ကျွန်တော်လည်း အစပိုင်းပဲဖတ်လိုက်ရတာပါ..။ ပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်တော့
တိုက်ခိုက်လေ ကောင်းလေပဲဗျ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေထည့်ထည့်ပြီး မစဉ်းစားကြနဲ့ဗျာ။ ဆရာ၀င်လုပ်တာ
မဟုတ်ဘူးနော်..။ ကွန်ပြူတာ စိတ်၀င်စားလို့ MZ မှာ လာလာဖတ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်ကွန်ပြူတာ
သမားတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်လေ့လာထားတာကိုယ်စီရှိကြတယ်။ တင်ပြ၊
ဆွေးနွေးကြတယ်။ ငြင်းရမယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘယ်ပညာရပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖြေမရှိသေးတဲ့
မေးခွန်းပေါင်းများစွာရှိနေသေးလို့ပါပဲ။ ငြင်းကြပါ။ ကိုယ်ခံယူပြီး ငြင်းနေတာကြီးက တလွဲကြီးဖြစ်နေပြီ
ဆိုတာသိတဲ့နေ့ လမ်းပြပေးသူကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။ ဒါရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။
ရှုံးနိမ့်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီငြင်းခုံပွဲတွေကနေ အဖြေတွေရှာနေကြတာပါ။ စိတ်ခံစားချက်တွေတတ်
နိုင်သလောက် ဘေးဖယ်ထားကြဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
ိ်[email protected] ကိုပို့ပေးပါနော်။ icon တွေကို စိတ်၀င်စားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ချင်လို့ပါ။